ရငေုပျသင်ျဘောပွီးတော့ ပွငျသဈရဲ့ ဖရီးဂိတျစဈသင်ျဘောရောငျးခမြှုကို ကွားဝငျဖွတျလုခဲ့ပွနျတဲ့ အမရေိကနျ
အမရေိကနျဟာ ဖရီးဂိတျစဈသင်ျဘောအသဈလေးစငျးနဲ့ ခတျေမီအဆငျ့မွှငျ့တငျမှုဆိုငျရာ Package တှကေို ဒျေါလာ ၉.၄ ဘီလီယံနဲ့ ဂရိကို ရောငျးခဖြို့ အတညျပွုလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ ပွငျသဈနဲ့ ဂရိတို့ရဲ့ ပဏာ မသဘောတူညီခကျြမှာ ပါဝငျတဲ့ တနျဖိုးနဲ့ထပျတူဖွဈပွီး….
အမရေိကနျရဲ့ ဂရိကို ကွီးမားတဲ့လကျနကျရောငျးခမြှုက ပွငျသဈအတှကျ စိတျပကျြစရာဖွဈလာခဲ့ရပါတယျ။အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနက ဂရိရဲ့ MEKO Class Frigates တှကေို အဆငျ့မွှငျ့တငျဖို့ ဒျေါလာ ၂.၅ ဘီလီယံတနျဖိုးရှိတဲ့ Multi-Mission Surface Combatant (MMSC) အတှကျ သီးခွားကမျးလှမျးမှုနဲ့အတူ အတညျပွုခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။…
“ဒီရောငျးခမြှုက ဥရောပမှာ နိုငျငံရေးတညျငွိမျမှုနဲ့ စီးပှားရေးတိုးတကျမှုအတှကျ အရေးပါတဲ့မိတျဖကျဖွဈတဲ့ နတေိုးမဟာမိတျရဲ့ လုံခွုံရေးကို မွှငျ့တငျပေးတာဖွဈပါတယျ””ဒါ့အပွငျ အမရေိကနျရဲ့ နိုငျငံခွားရေးမူဝါဒနဲ့ အမြိုးသားလုံခွုံရေးရညျမှနျးခကျြတှကေို အထောကျအကူဖွဈစမှောပါ” လို့…
ကာကှယျရေး၊ လုံခွုံရေးပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးအေ ဂငျြစီက ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒီအစီအစဉျကိုအကော ငျအထညျဖျောမယျဆိုရငျ ဂရိရဲ့ ဖရီးဂိတျရယောဉျတှကေို အဆငျ့မွှငျ့တငျရာမှာ ငါးလကျမအမွောကျတှနေဲ့အတူ အဆငျ့မွှငျ့တငျထားတဲ့ ဆိုနာစနဈလညျး ပါဝငျလာမှာဖွဈကာ Lockheed Martin, Rayeheon, VSE Corporation နဲ့ UK’s BAE Systems တို့က အဓိကကနျထရိုကျတာတှအေဖွဈ ဆောငျရှကျသှားမှာပါ။….
ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလမှာ ပွငျသဈက ဂရိကို ဒျေါလာ ၃.၄ ဘီလီယံတနျဖိုးရှိတဲ့ ဖရီးဂိတျလေးစငျးအတှကျ သဘောတူညီခကျြရခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေယျ့လညျး တရား ဝငျစာခြုပျခြုပျဆိုနိုငျခွငျးမရှိသေးဘူးလို့ ပွငျသဈစဈတပျပွောရေး ဆိုခှငျ့ရှိသူ Herve Garndjean က ပွောဆိုခဲ့ပွီး ၃လအတှငျး အပွီးသတျသဘောတူညီမှုရယူနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ထားကွောငျး ဖှငျ့ဟခဲ့ပါတယျ။….
အခုအခါ အမရေိကနျက သဘောတူညီမှုရယူနိုငျခဲ့တာက ပွငျသဈကို ဒေါသထှကျစရာဖွဈလာစပွေနျပါတယျ ။ ပွငျသဈဟာ ဩစတွေးလကြို ရငေုပျသင်ျဘောတှရေောငျးခဖြို့သဘောတူညီခကျြကလညျး အမရေိကနျရဲ့ ကွားဝငျမှုကွောငျ့ပကျြပွယျခဲ့ရပါတယျ။ အခုအခါ နောကျထပျတဈကွိမျ အလားတူဖွဈရပျမြိုးကို ရငျဆိုငျရတာဖွဈလို့ နှဈနိုငျငံကွား မပွလေညျမှုတှကေ ထပျမံကွီးထှားလာဖှယျရာရှိနပေါတယျ။…
ရေငုပ်သင်္ဘောပြီးတော့ ပြင်သစ်ရဲ့ ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘောရောင်းချမှုကို ကြားဝင်ဖြတ်လုခဲ့ပြန်တဲ့ အမေရိကန်
အမေရိကန်ဟာ ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘောအသစ်လေးစင်းနဲ့ ခေတ်မီအဆင့်မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ Package တွေကို ဒေါ်လာ ၉.၄ ဘီလီယံနဲ့ ဂရိကို ရောင်းချဖို့ အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပြင်သစ်နဲ့ ဂရိတို့ရဲ့ ပဏာ မသဘောတူညီချက်မှာ ပါဝင်တဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ထပ်တူဖြစ်ပြီး….
အမေရိကန်ရဲ့ ဂရိကို ကြီးမားတဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုက ပြင်သစ်အတွက် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဂရိရဲ့ MEKO Class Frigates တွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ ဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ Multi-Mission Surface Combatant (MMSC) အတွက် သီးခြားကမ်းလှမ်းမှုနဲ့အတူ အတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။…
“ဒီရောင်းချမှုက ဥရောပမှာ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုနဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါတဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ နေတိုးမဟာမိတ်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်””ဒါ့အပြင် အမေရိကန်ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးရည်မှန်းချက်တွေကို အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ” လို့…
ကာကွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေ ဂျင်စီက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကိုအကော င်အထည်ဖော်မယ်ဆိုရင် ဂရိရဲ့ ဖရီးဂိတ်ရေယာဉ်တွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ရာမှာ ငါးလက်မအမြောက်တွေနဲ့အတူ အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ ဆိုနာစနစ်လည်း ပါဝင်လာမှာဖြစ်ကာ Lockheed Martin, Rayeheon, VSE Corporation နဲ့ UK’s BAE Systems တို့က အဓိကကန်ထရိုက်တာတွေအဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။….
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလမှာ ပြင်သစ်က ဂရိကို ဒေါ်လာ ၃.၄ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ ဖရီးဂိတ်လေးစင်းအတွက် သဘောတူညီချက်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း တရား ဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ ပြင်သစ်စစ်တပ်ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ Herve Garndjean က ပြောဆိုခဲ့ပြီး ၃လအတွင်း အပြီးသတ်သဘောတူညီမှုရယူနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။….
အခုအခါ အမေရိကန်က သဘောတူညီမှုရယူနိုင်ခဲ့တာက ပြင်သစ်ကို ဒေါသထွက်စရာဖြစ်လာစေပြန်ပါတယ် ။ ပြင်သစ်ဟာ ဩစတြေးလျကို ရေငုပ်သင်္ဘောတွေရောင်းချဖို့သဘောတူညီချက်ကလည်း အမေရိကန်ရဲ့ ကြားဝင်မှုကြောင့်ပျက်ပြယ်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုအခါ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးကို ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်လို့ နှစ်နိုင်ငံကြား မပြေလည်မှုတွေက ထပ်မံကြီးထွားလာဖွယ်ရာရှိနေပါတယ်။…
Previous Article ဘီစကှတျမုနျ့တဈမြိုးတညျးကို လအတျောကွာစားသုံးခဲ့ပွီးနောကျ ကိုယျအလေးခြိနျ ၅၇.၂ ပေါငျကသြှားကွောငျးကိုပွောပွခဲ့တဲ့ မိနျးကလေး
Next Article တစ်ညတစ်လေ ကားလာရပ်ထားတာကို သူခိုးဖြစ်သူက ကားဘီးလေးဘီးလုံးကိုဖြုတ်ခိုးသွားခဲ့သောကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေခဲ့သည့် ကားပိုင်ရှင်